WHO’n Biyyoonni uggura sochii ummataa kaasuu eegalan hawaasa COVID-19 saaxilamoo ta’an eeguu akka qaban akeekkachiise - NuuralHudaa
WHO’n Biyyoonni uggura sochii ummataa kaasuu eegalan hawaasa COVID-19 saaxilamoo ta’an eeguu akka qaban akeekkachiise
Dhaabbannii Fayyaa Addunyaa Biyyoonni sochii daldalaa fi tajaajilaa eegalan, weerarri vaayirasichaa deebu’ee akka hin babal’annee fi lubbuun lammiilee akka hin dabrine of eeggannoo cimaa taasiisu qabu jedhe. Dhaabbatichi biyyoonni weerara vaayrasichaa too’achuu mirkaneessan sochii eegaluu ni danda’us jedhe.
Daayrektarri Olaanaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Doktar Teedroos Adhaanoom ibsa kenneen, biyyoonni weeraricha haala amansiisaa taheen hin too’atin jarjaranii sochii eegaluun isaanii dhibee kun deebi’ee akka babal’atuuf carraa banuu ta’a jechuun akeekkachiise.
Iddoolee hawaasni itti heddummaatutti of eegannoo cimsuun murteessaa ta’uus Dooktar Teedroos ibsee jira. Keessattuu kutaaleen hawaasaa dhibeef saaxilamoo ta’an vaayrasichaan lubbuu isaanii akka hin dhabne xiyyeeffaannoon hojjetamuu qaba jedhe. Haguuggii fuulaa seeraan fayyadamuu, wal irraa fagaachuu fi harka dhiqachuun weerara kana ittisuudhaaf namni hundi ga’ee isaa ba’uu akka qabus dhaame.
Gama biraatiin ammoo Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota sababa dhibee Koroonaatiin du’anii 800 dabruu gabaafame. Ministeerri fayyaa biyyattii ibsa har’a September 1, 2020 baaseen, hanga ammaatti vaayirasichi namoota 53,304 irratti akka argame ibsuun, lakkoofsi namoota sababa dhibee kanaatiin du’anii ammoo 823 gahuu beeksise. Akka Naannoo Oromiyaatti ammoo vaayirasichi hanga ammaatti namoota 6,447 irratti akka argameefi, lakkoofsi namoota du’aniitis 47 gahuu ibsi Biiroo Fayyaa Oromiyaa irraa bahe ni addeessa.
Biyya keennatti dhibeen guddaan koronaa osoo hin taane mootummaa jallataa kana
September 27, 2021 sa;aa 10:22 pm Update tahe